Khabiirka Cimiladu wuxuu qeexayaa Naqshadaha Google Analytics Naqshad kasta SEO waa inuu ogaadaa
Shaki kuma jiro in Google Analytics uu yahay mid ka mid ah qalabka ugu muhiimsan ee muhiimka ah marka ay timaado fahamka dhagaystayaasha iyo dhadhanka. Qalabkani wuxu kuu ogolaanayaa inaad si qoto dheer u qoddo nooca maqaarkaaga ah ee akhristayaashu rabaan in ay akhriyaan, meeshana ay helaan jacayl badan, iyo waddada u horseeda inay iibsadaan alaabadaada iyo adeegyadiinna. Labada shirkadood ee waawayn iyo kuwo yaryar waxay isticmaalaan Google Analytics waxayna ka faa'iidaystaan ​​sifooyinka, hagaajinta xogta goobahooda iyo qorsheynta tabta suuq-geynta wanaagsan
Laba sano ka hor, boqollaal shirkado waxay adeegsadeen Google Analytics iyaga oo qayb ka ah ururinta xogta iyo istaraatijiyado digital istaraatiijiyadeed. Shirkadaha dhammaan noocyada kala duwan waxay isticmaalaan qalabka falanqaynta webka , badankoodna waxay door bidaan Google Analytics. Falanqeeyayaasha Google Analytics waa Adobe, Websaydhka, iyo kuwo kale oo badan - benchmark business appraisal valuation. Laga yaabee inaysan suurtagal ahayn in midkoodna uu guuleysto sida Google Analytics.
Qaar ka mid ah sifooyinka wanaagsan ee Google Analytics ayaa waxaa halkan ka wada hadlay Nik Chaykovskiy, oo ah Maamulaha Guusha Macaamiilka Semt ..
Marka ay timaado falanqaynta sida website-yadaada iyo boggaga kala duwan ay u qabtaan, waa xaddiga soo-kabashada ee lagaa rabo. Waxaa intaa dheer, waa inaad hubisaa tirada bogagaaga aragtida, tayada gaadiidkaaga iyo cinwaanka IP ee isticmaaleyaashaaga. Taas awgeed, waa inaad ku dhejisaa cinwaanka sifooyinka iyo xallinta dhibaatooyinka hal mid. Isku day inaad sameyso boggaga si aad u diyaarsatid heerka bogga, laakiin tani si buuxda uma geli doonto bogaggaaga bogagga si aad u hesho gaadiid tayo sare leh. Taa bedelkeeda, waa inaad kala soocdaa aragtida bogga oo isku day inaad hoos u dhigto heerka aad u kacday xaddigaaga. Muuqaalkani wuxuu kaliya ku jiraa Google Analytics wuxuuna ku siin karaa waxtar badan.
Waa ammaan in la yiraahdo dhammaan shabakadaha internetka waxay leeyihiin bar baaritaan loogu talagalay dadka isticmaala si ay u yareeyaan waxa ay raadinayaan. Rugaha raadinta waxay sahmiyaan habka raadinta si aad u ballaadhan, oo waqti badan ku badbaadinaya isticmaalayaashaada. Muujintan waxaa lagu sameeyey qayb ka mid ah Google Analytics, oo waxaad ku dari kartaa bararka qaybta Raadinta Site. Qalabkan, waxaad arki kartaa noocyada alaabada iyo adeegyadu ugu habboon yihiin dhagaystayaashaada iyo sida loo sameeyo boggaaga si sahlan loogu socdo.
Liisaska dib-u-kicinta ayaa qiimo u leh ujeedooyinka suuq-geynta. Waxay kuu ogolaanayaan inaad gaarto dhowr macaamiil oo suurtogal ah iyo inaad martidaada u beddesho iibinta. Waxay ururiyaan macluumaadka ku saabsan booqdayaashaada, soo jiidashada iyaga oo ku socda boggaaga iyo alaabteeda. Muuqaalkan weyn wuxuu ku yaalaa Google Analytics waana hab aad u wanaagsan oo lagu dhajiyo inta badan dhagaystayaasha aad leedahay, iyada oo aan loo baahnayn in la maalgeliyo xeeladaha suuqgeynta iyo xayeysiinta warbaahinta bulshada. Si aad u hagaajiso goobaheeda, waa inaad tagtaa qaybta maamulka ee Google Analytics kadibna riix "Dib-u-sameynta" hoosta cinwaanka loo yaqaan "Property". Markaad awooddo fursadan, waxaad abuuri kartaa dhagaystayaal badan oo badan oo ku saleysan shuruudahaaga. Waxaad sidoo kale ku dari kartaa ololahaaga adwords mustaqbalka ee AdWords. Tani waa muuqaal aad u fiican ee Google Analytics, oo ku siinaya natiijooyin tayo leh.